कपालको समस्या अनुसार तेलको प्रयोग गरे हुने यी फाइदाहरु | | Uwjalkhabar
कपालको समस्या अनुसार तेलको प्रयोग गरे हुने यी फाइदाहरु
By ujwal khabar	 Last updated Oct 31, 2020
मौसममा हुने परिवर्तनले धरै कुरामा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । प्रभावित कुराहरु मध्य कपाल पनि एक हो । हो यो साचो हो कि मौसममा परिवर्तन हुदा यसले हाम्रो कपालमा पनि असर गर्छ । कपाल हाम्रो शरीरको एकदमै महत्वोपुर्ण विसेस्ता हो । यसले मन्छेको अकरसण बडाउने काम गर्छ ।
कपालको सेहार सुसारको लागि मान्छेहरु धरै हेयर ट्रीटमेन्टको प्रयोग समेत गर्ने गर्छन् । यस्ता हेयर ट्रीटमेन्टले कसैलाई राम्रो गर्छ भने कसैलाई नफाप्ने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कपालको लागि सबैभन्दा राम्रो तेल मानिन्छ । तेलको प्रयोगले कपाललाई पोषण दिने काम गर्छ र कपाललाई लामो र सिल्की पनि बनाउन मदत गर्छ ।
तर यस्तो हुनलाई पहिले हामीले हाम्री कपालमा भएको समस्याहरु मज्जाले बुझ्नु जरुरि छ । तेलको प्रयोग गर्नु भण्ड आघि हामीले हाम्रो कपालको समस्या बुझ्नु पर्छ र त्यही अनुसार कपालमा कुन तेल ठिक हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्नु पर्छ । आज हामी तपाईहरुलाई कस्तो कपालमा कस्तो तेल लगाए राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१. बाक्लो कपाल वहा भने सरसोँको तेल – सरसोँको तेलले खानाको स्वाद बडाउनको साथसाथै कपालसंग सम्बन्धित् समस्याको लागि पनि प्रयोग गर्नु मिल्छ । यस तेलमा भिटामिन, प्रोटिन, एन्टी-एजिंग, एन्टी-ब्याक्टेरिया जस्ता गुणहरु भरिपुर्ण रुपमा हुन्छन् । यस तेल कपालमा हालेर मसाज गर्नाले कपालको जरा दह्रो हुन्छ । यस भित्र भएका गुणहरु कपालको ब्याक्टेरिया र फंगससंग लड्ने काम गर्छन् । कपाल झर्ने र चाया पर्ने जस्ता कपालको समस्यालाई हटाएर कपाललाई बाक्लो र दह्रो बनाउने काम यो तेलले गर्छ ।
२. दुईमुखेर फ्रीजी कपालको लागि ओलिवको तेल – ओलिवको तेलमा एन्टी-ओक्सिडेन्ट, एन्टी-इफ्लेमेटरी. एन्टी-व्यकटेरियल जस्तो गुणहरु हुन्छन । यसको प्रयोग गरेर कपालको तालुमा मसाज गर्नले फ्रीजी, सुक्खा र दुईमुख भएको कपाल जस्तो समस्याबाट छुट्कारा मिल्छ । साथै यसले कपाल झर्ने समस्या पनि हटाई नया कपाल पलाउन पनि मदत गर्छ ।
३. कपालको गहिरो कन्डिसनिंगको लागि बदामको तेल – जाडो महिनामा शरीरको छाला र कपाल दुई सुक्खा हुने समस्या आउने गर्छ । यस्तो सुक्खा अवस्था भएको बेला कपाल झर्ने जस्तो समस्या आउने गर्छ । यस समस्याबाट बचनको लागि बदामको तेल प्रयोग गरेर कपाल मसाज गर्न सकिन्छ । भिटामिन ई र अन्टि-ओक्सिडेन्टले भरिपूर्ण यो तेलले कपालको गहिरो कन्डिसनिंग गर्ने काम गर्छ र कपाललाई दर्होई बनाउछ । गहिरो कन्डिसनिंग गर्नाले कपाल बाक्लो, शिल्की र चम्किलो देखिन्छ । साथै यो तेलको प्रयोग भिजेको कपालमा शिरामको रुपमा पनि लगाउन सकिन्छ।
४. डल र रुक्खो कपालको लागि नरिवलको तेल – धरै कपाल रंगाउने गर्नाले कपालको टेक्स्चर बिग्रिदै जाने गर्छ । साथै कपाल जरादेखिनै कमजोर पनि हुदै जाने गर्छ र कपाललाई रोखो र डल बनाउछ । यस्तो अवस्थामा भिटामिन, आइरन, अन्टि-ओक्सिडेन्ट, एन्टी-व्यकटेरियल जस्ता गुनले भरिएको नरिवल तेलले कपालको मसाज गर्नाले कपाललाई फाइदा गर्छ । यसको प्रयोगले कपालको जरालाई दह्रो बनाउनका साथै रक्तसंचालन पनि राम्रो गराउछ ।
५. ड्यामेज र फुलेको कपालको लागि अमलाको तेल – वास्तवमा अमलाको तेल सिद्धी अमलाबाट नानिकलेर अरु अन्य तेलमा राखेर निकाल्ने गरिन्छ । यस्तो हुनाले यो तेलले धरै गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । भिटामिन सी जस्तो गुणले भरिपूर्ण यो तेलले कपाल मसाज गर्नाले रोखो र ड्यामेज कपालबाट हामीले छुट्कारा पाउन सक्छौं । साथै समयभन्दा अगाडिनै कपाल फुल्ने जस्तो समस्याबाट पनि यसको प्रयोगले छुट्कारा मिल्न सक्छ । यस्तो हुनाले कपाल जरैदेखि बलियो, लामो र बाक्लो हुन जान्छ ।
यदी तपाई होमआईसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने, यो रुटिनको पालना गर्नुहोस्